TY160-3 bulldozer |
TY160-3 bulldozer waa nus-adag, isbeddel koronto, kontaroolada awooda la kaalmeeyay, qalabka haydarooliga ee duuliyaha la kantaroolo, oo leh hal kabaal gacanta lagu hayo sanduuqa meeraha gear. Waxay ku taal qol raaxo leh, khad casri ah oo loogu talagalay qaybo dabool oo xoojiya darawalka ugu dambeeya.
TY160-3 cagaf-cagaf waa 160 hooras nooca-raad-kormeer ah oo leh wadista tooska ah ee haydarooliga, qayb adag oo hakad iyo kaalmayn haydarooli ah, kontoroolka daabka haydarooliga ee tijaabada ah iyo isteerinka heerka keliya ah iyo kantaroolka biriiga.
TY160-3 bulldozer waxaa lagu gartaa hufnaan sare, aragti furan, qaab dhismeed la wanaajiyey, hawl fudud iyo adeeg qiimo jaban leh oo tayo dhan la isku halayn karo. Waxa lagu qalabayn karaa saddex shanks ripper, U-blade (awoodda 7.4 cubic mitir) iyo qaybo kale oo ikhtiyaari ah.
TY160-3 cagaf-cagaf ayaa lagu dabaqi karaa maaraynta dhulka dhismaha waddooyinka, saxaraha iyo shaqada goobta saliidda, dhul-beereed iyo dhismaha dekedda, injineernimada tamarta waraabka iyo korontada, macdanta iyo shuruudaha kale ee injineerada.
Miisaanka hawlgalka (ay ku jirto ripper) (Kg): 17000
Cadaadiska dhulka (ay ku jirto ripper) (KPa): 67
Min. banaynta dhulka (mm):405
Balaadhka daabka (mm): 3390
Cabirka guud (mm):5140×3388×3032
Awood la qiimeeyay (KW/HP):131/175
Isticmaalka shidaalka (g/KWh): ≤218
Nooca: Nooca lulshada ee looxa la buufiyay.
Qaab dhismeedka la hakiyay ee bar barbaraha: 6
Tirada rollers side (dhinac kasta):2
Horey (Km/h) 0-3.29 0-5.82 0-9.63
Dib u dhac (Km/h) 0-4.28 0-7.59 0-12.53
Max. cadaadiska nidaamka (MPa): 14
Wax soo saarka nidaamka L/min: 213
Hore: TY165-3 bulldozer
Xiga: SD6N Buldozer
TS165-2 Buldozer shaqo badan